အမျိုးသမီးသီးသန့် ဘတ်စကားရန်ကုန်တွင် ယနေ့ စတင်ပြေးဆွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » အမျိုးသမီးသီးသန့် ဘတ်စကားရန်ကုန်တွင် ယနေ့ စတင်ပြေးဆွဲ
အမျိုးသမီးသီးသန့် ဘတ်စကားရန်ကုန်တွင် ယနေ့ စတင်ပြေးဆွဲ
Posted by အာဂ on Feb 14, 2012 in Myanma News | 30 comments
ထူးထူးခြားခြား အမျိုးသီးသန့် ယာဉ်လိုင်း ကား ယနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာစတင်ပြေးဆွဲနေပြီဟုသိရပါတယ်။ ကားလိုင်းကတော့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်က ပါရမီ၊ အဓိပတိ ယာဉ်လိုင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကားရဲ့အရှေ့အနောက် ၊ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာ အမျိုးသမီးများအတွက် သီးသန့်လို့ ဆိုင်းဘုတ်များရေးဆွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ချစ်သူများနေ့ဖြစ်တာကြောင့် အကြောင်းမသိပဲတက်စီး မိတဲ့ စုံတွဲအချို့လည်း အနည်းငယ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါယာဉ်လိုင်းမှာ မူလဆိုခဲ့ သလို အမျိုးသမီး ယာဉ်မောင်၊စပယ်ရာ တို့ထားရှိမယ်ဆိုပေမဲ့ ယခုလောလောဆယ်မှာတော့ အမျိုးသား ယာဉ်မောင်း၊စပယ်ရာတို့နှင့်သာ ပြေးဆွဲနေကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ အမျိုးသမီးသီးသန့် ဆိုသော်ငြား အမျိုးသားကလေးငယ်များကိုတော့ စီးခွင့်ပေးထားပါတယ်။ထိုသို့အမျိုးသမီးသီးသန့် ယာဉ်လိုင်း စီးခမှာ ၂၀၀ကျပ်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးထုအများ စုကတော့ ထောက်လှမ်းရေး ရန်ကကင်းဝေပြီးဖြစ်လို့ ၀မ်းမြောက်စွာကြိုဆိုကြတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။
ကောင်း၏။ ကောင်း၏။ မိန်းမများ ဘေးကင်းရန်ကင်းရှိနိုင်တော့မည်….
၀ီစီထက်စာရင်တော့တော်သေးတာပေါ့။ အစီးရေများများထွက်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ ရှာပြီးစီးကြည့်လိုက်အုံးမယ်။ ဘယ်ကနေဘယ်သွားတာလဲ။ ဘယ်နားမှာစီးရမှာလဲ။
ပါရမီ (အဓိပတိ) တွေ သွားတဲ့လိုင်းတွေမှာ စီးလို့ရတယ်ပြောပါတယ်..
ဒီနေ့ကတော့ ၁၇၇ လိုင်းမှာ ဆွဲနေတာတွေ့ပါတယ်..
များတို့ အတွက်ကော ဘာကားထုတ်ပေးမှာလဲဟင်
များတို့ ကော စီလို့ ရလားဟင်
များတို့ ကတော့ ဘဲဘဲသီးသန့် ကားတွေပေါ်လာမှပဲ စီးပေတော့။ မိန်းမသီးသန့်ဆိုရင် များတို့လည်းစိတ်ညစ်မှာအမှန်ပဲလေ။
မစိန်ပေါက်တို့ တစ်တွေ OK ပြီဟေ့။ ကျား … နဲ့ မ ခွဲစီးရတော့ ကျားမ (ကျမ) တွေ အဆင်ပြေပေါ့ ။ ဘယ်ကားလာလာ တက်
အင်း…အထူးကားလိုတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့ လူပိုမတင်ရဘူးဆိုပေမယ့်ခိုးတင်တယ်….စစ်ဆေးရေးရှိရင် လူပိုတွေကို ဘေးခုံမှာခဏမှေးထိုင်ခိုင်းတယ်…အမျိုးသားတွေကိုခိုးတင်ပြီး စစ်ဆေးရေးရှိရင် ကြားထဲမှာတော့ ဖွက်မထားလောက်ပါဘူးနော်…..
အမျိုးသမီးတွေ အတွက်တော့ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ကားလိုင်းပေါ့
ဒါပင်မယ့် ချစ်သူနဲ့အတူသွားမယ့် သူတွေအတွက်တော့ ဒီလိုကားမျိုးက
အထူးေ၇ှာင်ကြဉ်ရမယ့် အထဲမှာ ပါမယ်ထင်တယ်နော် ……….
R Ga ရေ။
ညီလေးပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ဘီလူးကြီးကို သတိရသွားပါတယ်။
ဘီလူးကြီးရေးခဲ့တဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ပုဒ် ရှိတယ်ဗျ။
တဏှာရူးတွေ သတိထား http://myanmargazette.net/81272/arts-humanities
ကိုယ့်မိန်းမကို ထောက်လှမ်းရေးလုပ်တဲ့ တဏှာရူးကို
လက်သီးနဲ့ ဆွဲမထိုးပဲ တန်ပြန်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်တာကို ရေးထားတာပါ။
အရမ်း ရယ်ရပါတယ်။ ဒီကွန်းမန့်မှာ နည်းနည်းရေးပြခွင့်ပြုပါဗျာ။
ကျုပ်ဘယ်လိုမှ မျှော်လင်မထားတဲ့ လုပ်ရပ်ကို လုပ်နေ
တဲ့ ကိုကျော်မြင့်သန်းရဲ့အပြုအမှုကို တွေ့လိုက်ရတော့ ရယ်ချင်စိတ်ကိုမနည်း ထိမ်းထားလိုက်ရတယ် ကျုပ်ကလဲ ဒါမျိုးဆို
အရယ်(ရီ)ကခပ်သန်သန်ရယ်လေ ဒီလူကြီးလုပ်နေပုံက သူမိန်းမကိုယ်လဲ လွတ်ရာကျွတ်ရာဆွဲမခေါ် ဟိုတဏှာရူးကိုလဲ
ရန်မရှာပဲ သူ့မိန်းမကို ထောက်လှမ်းရေးလုပ်နေတဲ့ တဏှာရူးရဲ့ နောက်တည့်တည့်ကိုရောက်အောင်သွားလို့ သူ့ ဖွားဖက်
တော် နဲ့ပြန်ပြီး ယောကျားခြင်း ထောက်လှမ်းရေးပြန်လုပ်နေတာကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ တာပါပဲဗျာ။။
တစ်ခါတစ်ခါ ကားဘရိတ်ဆောင့်အုတ်လိုက်တဲ့ အခါများဆို ဒီလူကြီးခါးကိုတောင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲပြီး အတင်း ဖိကပ်
ထားလိုက်သေးတယ် ကျုပ်ကိုလဲအသာနေဆိုတဲ့သဘောနဲ့ မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြလိုက်သေးရဲ့ ဒီတဏှားရူးလဲ ပထမတော့
မရိပ်မိသေးဘူးဗျ နောက်မှ သူနောက်ကနေ ထူးထူးခြားခြားအထိအတွေ့ကြီးနဲ့ အတင်းကြီကို ဖိကပ်ထားတာကြီးကို သတိ
ထားမိသွားဟန်တူပါတယ် အရှေ့က သူရဲ့ တဏှာပေမကို စိတ်မရောက်အားတော့ အနောက်ကအန္တရာယ်ကြီးကိုလွတ်အောင်
ရှောင်ဘို့ ကျိုးစားရှာပါတော့တယ် မျက်မှန်အောက်က မျက်လုံးကြီးပြူးထွက်လာတဲ့ အထိသူနောက်က အန္တရာယ်ကောင်
ကိုကျော်မြင့်သန်းကို လှည့်လှည့် ကြည်ပါတယ် ဟိုလူကလဲ သူလှည့်ကြည့်လေတိုင်းမသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အတင်း
ခါးအောက်ပိုင်းကို အနောက်ကနေ ဖိကပ်နေပါတော့တယ် ဒီတဏှာရူးကြီးလဲ ဟိုဘက်ကို ဖင်လေးလှည့်ေ၇ှာင်လိုက် ဒီဘက်
ကိုခါးလေးလိမ်ရှောင်လိုက်နဲ့ ဘယ်လိုမှ မလွတ်သာဖြစ်နေတဲ့အပြင် သူ့ရဲ့နဖူးက ချွေးသီးချွေးပေါက်တွေဟာ ဇီးကင်းခန့်
ကျဆင်းလာပြီး တစ်ကိုယ်လုံး ချွေးတွေနဲ့ ရွှဲနစ်နေပါတော့တယ် ခဏခဏလဲလှည့်လှည့်ကြည့်ပါတယ် ဒီလူကြီးသူ့ရှေ့က
ကိုကျော်မြင့်သန်းမိန်းမကိုလဲ ဂရုမပြုအားတော့ ကျုပ်လဲရယ်(ရီ)ချင်စိတ်ကို မနည်းထိမ်းထားရတယ် ကျုပ်မျက်နှာမချိုမချဉ်
ဖြစ်နေတာကို ဒီလူကြီးတွေ့သွားတယ် ထင်ပါရဲ့ ကျုပ်ကိုလဲ ဘုကြည့် ကြည့်ပါတယ် သူနောက်ကကိုကျော်မြင့်သန်းကိုလဲ
ဘုရှိုး ရှိုးပါတယ် ဟိုလူကလဲ သူမဟုတ်သလိုဘာလိုနဲ့ မတည့် တည့်အောင် အနောက်ကနေ လိုက်ပြီး ဖိနေပါတော့တယ်
သူတို့နှစ်ယောက်အတွဲလိုက်ကြီး ဖားပူးတွဲ ပူးနေသလိုကြီးကိုအနီးနားက ခရီးသယ်တွေလဲ သတိထားမိလာပါတော့တယ်
ခရီးသယ်တွေလဲ သူတို့ဖားပူး အတွဲကြီးကို မသင်္ကာသလိုပုံစံတွေနဲ့ကြည့်ကြကာ အနည်းငယ်လွတ်ရာကို ရှောင်ပေးကြ
ရှာပါတယ် ကိုကျော်မြင့်သန်းရဲ မိန်းမဟာလဲ သူယောကျားလုပ်ပုံကိုကြည့် ပြီး ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ဖြစ်နေရှာပါတယ်
ကျုပ်လဲမျက်နှာလွဲနေလိုက်တယ်လေ တော်ကြာအကျယ်ကြီး ထရယ်(ရီ)မိတော့မယ်ဗျ မအောင်နိုင်တော့ဘူး ကျုပ်ကသာ
ရယ်(ရီ)ချင်နေတာ ဟိုလူကြီးခမျာ လက်ကိုင်ပုဝါကြီး ထုတ်ထုတ်ပြီးချွေးတွေသုတ်လိုက် ခါးလေးလိမ်ပြီးရှောင်လိုက် ဖင်လေးနွဲ့ပြီးရှောင်လိုက် အရှေ့ကို တိုးပြေးလိုက် နဲ့ ပုံပျက်ပန်းပျက်ကြီးကိုဖြစ်နေပါတော့တယ်
အဲဒါ တစ်ကယ်ကြီးနော် ကိုဘလက်
ဖြစ်ရပ်မှန် တစ်ခုဘဲ ဗျာ ။
တစ်ချိန်ကြရင် ပြန်တွေးမိတိုင်း ရယ်ချင်စရာဖြစ်မှာပါ ။
ကွန်းမန့်က မပြီးသေးပဲ တက်သွားလို့ဗျ။
ကျွန်တော် ရွာထဲမှာ ဖတ်ရသမျှ
ဒီလောက်ရယ်ရတာ မတွေ့ဘူးသေးဘူး။ မယုံရင်
အပေါ်မှာ လင့်ပေးထားတယ်ဗျာ။ ဖတ်ကြည့်ကြပါ။
ဆရာတာရာမင်းဝေ ၀တ္တုတစ်ခုမှာတော့ တန်ပြန်ထောက်လှမ်းရေးတော့ မဟုတ်ဘူး သူနည်းတစ်မျိုးရေးထားတယ် ကိုဘလက်ရေ ။ ကားပေါ်မှာ အထောက်ခံနေရတဲ့ ကောင်မလေး ကို နေရာရနေတဲ့ဇာတ်လိုက်က နေရာဖယ်မပေးပဲ။အဲဒီထောက်လှမ်းရေးကိုနေရပေးလိုက်သတဲ့။
ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ ကောင်မလေးကို နေရာပေးလိုက်ရင် သကောင့်သားက နောက်တစ် ယောက်ပြောင်းသွားမှာဆိုးလို့တဲ့…။ ဒီကောင်သာထိုင်နေရရင် ကျန် တဲ့လူတွေလည်းဘေးကင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာ။
အဲဒီအမျိုးသမီး သီးသန့်ကားကြီးက သူတို့တွေကိုပဲသီးသန့်ရွေးခေါ်သွားတော့
ကျန်တဲ့လူတွေက ငုတ်တုတ်လေးတွေ မျှော်နေပြီး ကျန်ခဲ့ရမှာပေါ့..
လူအချင်းချင်း ခွဲခြား ခြင်းကင်းရှင်းကြပါစေ..
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်ကနေ ၄ ရက် ပဲ စမ်းသပ်ပြေးဆွဲ မှာ တဲ့၊ ရလဒ်ကိုကြည့်ပြီး
ဆက်လက် ဆွဲသင့် မဆွဲသင့် တဲ့။
ဒီလိုဖြစ်လာတော့လည်း ကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ရပေမယ့်
ဒါက သဂျီးမင်းအလိုတော်အတိုင်း မတူတဲ့အတွေးနဲ့ အတိုက်ခံဖက်ကနေ ပြောကြည့်တာ
ဒီရွာထဲလည်း ပြောဘူးတဲ့သူရှိပါတယ် ဘူလဲတော့သိဘူး
အဲ့သည်ကားပြေးတဲ့လိုင်းမှာ အဲ့သည်ကားတွေကို အများသုံးအနေနဲ့ တိုးချဲ့လိုက်ရင်
သူများလုပ်တာကို မကောင်းဘူးပြောရတာ ဂွတော့အကျသား
အော်..။ အမျိူးသား သီးသန့် တွေ လည်း ရှိလာရင် ကောင်းမယ် ။ အမျိုးသမီးတွေ..နဲ့ အတု စီးရ တာ..တခါ တစ်ခါ…စိတ်ညစ်ရတယ် ဗျ။ အားနာ ရတာတွေ..ရှိတယ်လေ ။ ဒါပေမယ့် ..အမျိုးသမီး သီးသန့် တွေ ရှိလာရင်… အလိုလို အမျိုးသားတွေ နဲံ့ကွဲ သွားမှာ ထင်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့်…. မိန်းမလျှာတွေ..က ဘယ်ကားပေါ် တက်မလဲ….။
ကျွန်တော် တစ်ယောက် အမြင်ပါနော် ။
အာဂ ရေ…တာရာမင်းဝေရဲ့ … အဲဒီ စာယအုပ်က အရမ်းကောင်းတယ်နော် ။ ရဲဘုန်းမင်းနဲ့ ဓာရီ..ဆိုတဲ့ ဇာတ်လိုက် နှစ်ယောက် ပါတယ်လေ.။ ငါသည်သာ ပန်းဖြစ်၍ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ပွင့်ခွင့် ရခဲ့ သော်…ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေ..။
အင်း … အခုလို အမျိုးသမီး သီးသန့်ကားတွေ ပြေးဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်း ကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ အမျိုးသမီး သီးသန့်ကားမှန်း သိအောင်တော့ စာတွေကို ကားအပြည့် ကပ်ထားရမယ်နော့။ တော်ကြာ မှားတက်မိမှ … အဟီး … ချက်ချရာဂျီး ဖစ်နေဦးမယ် …
အောင်သူရဲ့ သီချင်းထဲကလိုပေါ့ …
” ကားမှားစီးလို့ … အရှက်တကွဲ … မျက်နှာငယ် … လှောင်ပြောင်ခံရတယ် …တူ့နှယ် … တူ့နှယ် … ဗြောင် …”
လိင်တူချစ်သူများအတွက် အထူးသီးသန့်ကား ပြေးဆွဲပေးဖို့ ဒီနေရာကနေ အလေးအနက် တိုက်တွန်း တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်
လိင်တူချစ်သူများဟာ ဆိုရင်ဖြင့် ယောင်္ကျားမိန်းမ ဘာမှမခွဲခြားသော ကားများစီးနင်းသည့်အခါ ယောင်္ကျားများက တစ်မျိုး၊ မိန်းမ များက တစ်ဖုံ ဆိုသလို မလိုသလို … အမြင်ကပ်သလို … စသည့် စသည့် မျက်ဝန်းများနှင့် ရင်ဆိုင်ရပါတယ် … အုပ်စုလိုက် လူငယ်လေးများရဲ့ ရိသဲ့သဲ့ လုပ်ခြင်းကိုလည်းခံရပါတရ် (ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အဆင်လေးတွေလုပ်ရင်တော့ လုပ်ပါစေပေါ့) … ယာဉ်နောက်လိုက်များရဲ့ မတော်တရော် မထိတထိ လုပ်ခြင်းများကိုလည်း ခံရပါတယ် … ထိုသို့သော အကြောင်းများကြောင့် လိင်တူချစ်သူများကိုလည်း အထူးသီးသန့် ကားများ ပြေးဆွဲပေးပါလို့ အထူး မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် …
လိင်တူချစ်သူများကိုယ်စား ခေါင်းစား တွေ့သမျှအကုန်စား …. ဟိုက်…. မုန့်နဲ့ရောကုန်ပီ …..
(ဤစာအား လိင်တူချစ်သူများကိုယ်စားရေးပေးသည့်အတွက် လိင်တူချစ်သူများနဲ့ မတွေ့ကြုံရပါလို၏)
ဒါ Gender Discrimination ပဲ ။
လူ အချင်းချင်းကို လိင်ပေါ်မူတည်ပြီး မတရား ခွဲခြားမှုပဲ ။
ဒီမိုကရေစီ ၊ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် တရားမျှတမူကို
လေးစားတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ လုပ်လေ့မရှိပါဘူး ။
အင်းးးးး မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ၊ ဘယ်လိုပြောရမလဲ မသိပါဘူး ။
( လူ အချင်းချင်းကို လိင်ပေါ်မူတည်ပြီး မတရား ခွဲခြားမှုပဲ )
ကိုယ့်အပေါ်ကျလာတဲ့ မသမာမှု့ကို သက်ဆိုင်သူနဲ့ တိုက်ရိုက်မဖြေရှင်းဘဲ
ဆင်ဝှေ့ရမ်ရှောင် မသမာမှု့ပြုပြီး ကျား/မ ခွဲခြားလိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ
ဒီအကြောင်းဟာ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့စည်းတွေကို ရှေးအယူစွဲတွေနဲ့ ရန်တိုက်ပေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ
နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက် တစ်ခုထည်း လှုပ်ဆော်မှု့လို့လည်း မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ
နှမသားချင်းဆိုတဲ့ အတွေးအမြင်တွေဖက်ကလည်း ပြောနေကြပါတယ်ခင်ဗျ
အန်ကယ်ဦးလေးကြီးနိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့ဘကြီး ရဲ့ အမြင်ကိုလည်း ပိုစ့်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့
မိန်းကလေး အထူးဆိုတော့ကောင်းလိုက်လေးခြင်းရယ်လို့တွေ့မိပါတယ်။ အထူးထပ်ကြပ်ရရင်တော့မကောင်းဘူး။ ကိုသူရဇော်ပြောတဲ့ အလယ်လူသွားလမ်းမှာ ၀တ်ဝတ်လေး တရားခံ စောင့်ကြောင့်ထိုင်ရသလို ထိုင်ရရင်ဖြင့် မိန်းမများထိုင်ရ လို့ကတော့ ၀ိုင်းဆဲခံရမယ့် စပါယ်ရာ မလွယ်ဘူး။ ဟိုတစ်ခါ ကိုယ့်တွေ့ဆိုတဲ့ rose ရဲ့ပို့စ်ထဲကလို စပယ်ရာ တရာတန အပြဲ အမ်းလို့ကတော့ မိန်းမများဝိုင်း ပြောရအောင် အော်ပြစ်လိုက်မယ်။ သေပြီသာမှတ်။ အလင်းစက် ရဲ့ယောင်္ကျားသီးသန်းကားဆို ရင်တော့ “သများ (ဖားတစ်ပိုင်းငါးတပိုင်း) “တွေ သွားပြီ။ ဟိုကားလဲမရ ဒီကားလဲမရ လမ်းလျှောက်သွားရမယ့်ဖြစ်ခြင်း။ အတွဲတွေတော့သနားစရာ
ဘယ်ကနေ ဘယ်ထိကို စီးခွင့်ပေးတာလဲ။ အမြဲတမ်း အဓိပတိစီးနေတာပါပဲ။ ခုထိ မတွေ့မိသေးလို့ပါရှင်။
ချစ်က ဒီကားစီး ကိုက နောက်ကားနဲ့လိုက်ခဲ့မယ်။
ဟိုရောက်ရင် ၃သိန်းတန်ဖုန်းနဲ့ Miss callပေးလိုက်။
အရင်တုန်းကတော့ အဲဒီလိုမျိုးကားတွေရှိဖူးတယ်ကြားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူကတော့ တစ်မျိုးဗျ။ ကား ရဲ့အလယ်ကောင်မှာ သံဇကာခြားထားပြီး မိန်းမလေးတွေက တစ်ဖက်။ ယောက်ျားလေးတွေက တစ်ဖက်နေရတာတဲ့ အခုလည်းအဲဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်ရင်တော့ ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူး။နောက် အရင်တုန်းကလို နှစ်စီးတွဲယာဉ်တွေလိုပေါ့။ အရှေ့က မိန်းကလေး စီး အနောက်က ယောက်ျားလေးစီးပေါ့။
ဟုတ်တယ်ဗျ..အရင် က အမှတ်(၉) ကားတွေကအဲလိုလုပ်ထားကြတယ်လေ…
အမှန်တော့ လိုင်းကားတွေအဲလိုလုပ်မယ့်အစား အလုပ်သွားအလုပ်ပြန်ချိန်တွေမှာဖြစ်တတ်တာဆိုတော့ အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့ ပြီးတော့ အစိုးရရုံးတွေအနေနဲ့ ဖယ်ရီတွေ အပြည့်အစုံ ထားပေးနိုင်မယ် ဆို ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်နော်..
ဘတ်စကား အားလုံး အထူးကားခေါင်းစဉ်တပ် အထူးကားဈေးအတိုင်းပေးစီးခိုင်းပြီး လူပိုမတင်ရင် တော်ပြီပေါ့။ မတ်တပ်ရပ်နေရတဲ့လူမရှိသရွေ့ ထောက်လှမ်းရေး ကိစ္စ ကင်းနေမှာဘဲ။ ဒါလေးများ ဗမာဆေးစား
wityee mg says:
အမျိုးသမီးထုအများ စုကတော့ ထောက်လှမ်းရေး ရန်က
သိရှိရပါတယ်။ခုလိုကြားရတော့ တမျိုးကြီးပါလား ကိုအာဂ ရယ်။